नेपाल आइडलको चौथो सिजन आजदेखि सुरु, कोको हुन् नयाँ निर्णायकहरु ? - ramechhapkhabar.com
नेपाल आइडलको चौथो सिजन आजदेखि सुरु, कोको हुन् नयाँ निर्णायकहरु ?
गायन रियालिटी शो ‘नेपाल आइडल’को चौथो सिजन आजदेखि सुरु हुँदैछ । एपीवान टेलिभिजनबाट प्रसारण हुँदै आएको उक्त शो आज राति ८ः३० बजेदेखि सुरु हुने ‘नेपाल आइडल’ ४ का होस्ट आसिफ शाहले जानकारी दिएका छन् । यस्तै यस सिजनको मुख्य प्रायोजकका रूपमा कोका–कोला रहेको छ । कोका–कोला नेपाल आइडल सिजन ३ को पनि मुख्य प्रायोजक थियो ।
नेपाल आइडल सिजन–४ मा नयाँ जजहरू समेत थपिएका छन्। वरिष्ठ संगीतकार शम्भुजित बास्कोटा, सुगम पोखरेल र सिवानी मोक्तानले जजको भूमिका निर्वाह गर्ने छन्। उद्घोषकमा आसिफ शाह र रेश्मा घिमिरे रहने छन्। करिब चार महिनापछि नेपालले चौथो नेपाल आइडल पाउनेछ।
विवाह पञ्चमीः राति राम-सीता विवाह सम्पन्न, आज रामकलेवा हुँदै
मिथिलानी महिलाहरूले परम्पराअनुसार हाँसोठट्टा र गीतका माध्यमले जन्तीलाई गाली गर्दा सहभागी श्रद्धालुलाई साँच्चै त्रेतायूगको अनुभूती गरायो । विवाह समारोहमा लाखौं श्रद्धालु सहभागी थिए । सीता-राम विवाहको खुशियालीमा महन्तहरु र कतिपय श्रद्धालु रुपैयाँ समेत लुटाए।
आज सामुहिक भोजका लागि जानकी मन्दिरमा ३६ व्यञ्जनको भोजन पाक्दैछ । जन्तीको रुपमा भगवान रामको जन्मभूमि भारतको अयोध्या र अन्य स्थानबाट आएका साधुसन्तलाई भोज खुवाउने र दक्षिणासहितको बिदाइ गर्नुलाई रामकलेवा भनिन्छ । रामकलेवाको क्रममा भारतबाट आएका साधुहन्तलाई जनकपुरकी महिलाहरुले गीतका माध्यमले गाली गर्नुका साथै मनोरञ्जन गराइन्छ ।